ကွန်ပျူတာ ဂိမ်းစွဲမှုရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ရင်နင့်ဖွယ် ဓာတ်ပုံ-(MCOT
အသက် ၁၄ နှစ်သား လူငယ်တဦးဟာ ကွန်ပျူတာ ဂိမ်းကစားဖို့ သူ့ကို ခွင့်မပြုတာကြောင့် မိခင်ဖြစ်သူကို သတ်ခဲ့တယ် ဆိုတဲ့အမှုတခု ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့မှာ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Read more »
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် နိုင်ငံခြားဧည့်ပါမောက္ခများ ပြန်လည်သင်ကြားမည် Open
Society Foundation ၏ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးမှုဖြင့် နိုင်ငံတကာမှ ဧည့်ပညာရှင်/ပါမောက္ခ ၁၂ ဦးက လာမည့် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ တက္ကသိုလ် ပညာသင်နှစ်တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရှိ ရှေးဟောင်းသုတေသန ပညာဌာန အပါအဝင် ဘာသာရပ်ဌာန သုံးခုသို့
လာရောက်သင်ကြားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာတင်ထွန်းက ပြောကြားသည်။ အဆိုပါ ဧည့်ပါမောက္ခများသည် ရှေးဟောင်း Read more »
11/03/2012 08:26:00 PM
မလေးရှားနှင့် စင်ကာပူတွင် အလုပ်သမား သံအရာရှိ ထားမည် မြန်မာအလုပ်သမားများ
အခွင့်အရေးကို ကာကွယ်ပေးရန် မလေးရှားနိုင်ငံနှင့် စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် အလုပ်သမားရေးရာ သံအရာရှိ (Labour Attache) ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ခန့်အပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးမြင့်သိန်းက ပြောကြားသည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ခန့်အပ်သွားမည် ဆိုသော်လည်း အချိန်ကာလ အတိအကျကို သေသေချာချာ မပြောနိုင်သေးကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။ Read more »
11/03/2012 08:25:00 PM
နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၂။ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ ဆွစ်ဇလန် နိုင်ငံ သံ ရုံးဖွင့်ပွဲကိုရန်ကုန် မြို့ (၇)မိုင် ရှိ အဆိုပါ သံ ရုံးမှာ ဒီကနေ့ မနက် ၁၀ နာရီ က ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့။ ဆွစ်ဇလန် နိုင်ငံ နိုင်ငံ ခြားရေး ၀န်ကြီး Didier Burkhalter နှင့် ဘဏ္ဍရေး ၀န်ကြီး ဦးဝင်းရှိန် တို့ ဖဲ ကြိုးဖြတ်ပြီး
ဖွင့် လှစ်။ သမ္မတ ရုံးဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း နဲ့ မွေးမြူရေး ၀န်ကြီး ဦးအုံးမြင့် တို့လဲ Read more »
11/03/2012 06:42:00 PM
ကိုရီးယား သင်ခန်းစာ နိုင်ငံကို တစ်ဟုန်ထိုး ဖွံ့ဖြိုးလာအောင် မျိုးဆက်တစ်ဆက် အတွင်း တွန်းတင် နိုင်ကြောင်း ပြသခဲ့သလို မြန်ဆန်လှသည့် နှုန်းဖြင့် နှစ်ကာလ ရှည်လျားစွာ တိုးတက်ခဲ့သည့် တောင်ကိုရီးယား သည် မြန်မာနိုင်ငံ လေ့လာသင်ယူ သင်ခန်းစာ ရယူသင့်ဆုံး နုိုင်ငံများအနက်မှ တစ်နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။
11/03/2012 06:07:00 PM
2012 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၂၂ . ၂၃ . ၂၄) ရက်နေ့များက ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦးမြို့ နယ်တွင်
ဖြစ်ပွားသောအဓိက ရုဏ်းကြောင့် ဒဏ်ရာရရှိသူ (၃၈) ဦးရှိပြီး သေဆုံးသူ (၁၅) ဦး ရှိခဲ့ရာ (၆) ဦးကိုသာ အောက်တိုဘာလ (၂၂ . ၂၄ . ၂၆) ရက်နေ့များက အလောင်းများ ရရှိပြီး သင်္ဂြိုဟ်ပြီးဖြစ်သော်လည်း ကျဆုံးသွားသူ ရခိုင် အမျိုးသား (၉) ဦး
11/03/2012 05:56:00 PM
တမခ ( ၄၄ ) နှင့် ကေအင်န် အယ်လ်အေ တမဟ ( ၁ ) ပူးပေါင်း ဘောလုံး အသင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင် အစည်းအရုံး ဘောလုံး အသင်းတို့ ချစ်ကြည်ရေး ဘောလုံး ပြိုင်ပွဲ မွန်ပြည်နယ်၊ ဘီးလင်းမြို့နယ်၊ မြို့နယ် အားကစား ကွင်းတွင် တမခ(၄၄) နှင့် ကေအင်န် အယ်လ်အေ တမဟ (၁) ပူးပေါင်း ဘောလုံး အသင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင် အစည်းအရုံး ဘောလုံး အသင်းတို့ ချစ် ကြည်ရေး ဘောလုံး ပြိုင်ပွဲကို ၃၁-၁၀-၂၀၁၂ ရက်နေ့ ညနေပိုင်း တွင်ကျင်းပ ပြု လုပ်ခဲ့ ပါသည်။ ညနေ ၂ နာရီမှ ၄
နာရီ ၄၀ မိနစ်အထိ ရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင် များက ဘောလုံး ပြိုင်ပွဲသို့ လာရောက် အားပေး Read more »
မကြာသေးခင် ရက်ပိုင်းအတွင်းက ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပဋိပက္ခများသည် သာမန်အားဖြင့် ကြည့်ပါက ဒေသခံ ရခိုင် တိုင်းရင်းသားများ နှင့် တစ်ဖက်နိုင်ငံမှ ဝင်ရောက် အခြေချလာသော ဘင်္ဂါလီ လူမျိုးများ အကြား လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး တင်းမာမှုများဟု ထင်မှတ်စရာ ရှိသော်လည်း သေချာ စဉ်းစားကြည့်သောအခါ နောက်ကွယ်တွင် အကြောင်းတရားများစွာ ရှိနေနိုင် ပါသည်။ ထို့အတူ ပုံဖော် စဉ်းစားရာတွင်လည်း ထည့်သွင်း စဉ်းစားရမည့် နည်းလမ်း Option
များစွာရှိနေပါသည်။ ယနေ့ အချိန်အထိတိုင် ထိုပြဿနာ များ ပုံမှန် ပကတိ အခြေအနေသို့ မရောက်ရှိနိုင်သေးခြင်းကို ကြည့်ပါက ပြဿနာ အတိမ်အနက်ကို ခန့်မှန်း နိုင်ပါသည်။ Read more »
မူစယ် ၁၀၅ မိုင်ဇုန်ရှိ ကုန်ထမ်း အလုပ်သမား ၂၅၀ ကျော် အလုပ်ဖြုတ်ခံရ သျှမ်းပြည်
(မြောက်ပိုင်း) မူစယ် ၁၀၅ မိုင်ကုန်သွယ်ရေးဇုန်၌ ကုန်
တင် ကုန်ချ အလုပ်လုပ်နေသော အလုပ်သမား ၂၅၀ ကျော်ကို သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားရုံးမှ လွန်ခဲ့သည့် တစ်ပတ်ခန့်က ရုတ်တရက် အလုပ်ထုတ်လိုက်သဖြင့် အလုပ်သမားမိသားစုဝင်များ စားဝတ်နေရေး အခက်တွေ့နေကြောင်း သိရသည်။
တရုတ် - မြန်မာ နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေးလမ်း ဖြစ်သည့် မူစယ် - မန္တလေးလမ်း၌ Read more »
ချောင်းသာကမ်းခြေ တွင် သိမ်းဆည်းခံ လယ်မြေ ပြန်လည် ရရှိရေး လူအင်အား၂ဝဝကျော် ဆန္ဒထုတ်ဖော် ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေး အကြောင်းပြချက် ဖြင့် သိမ်းဆည်း ထားခဲ့သော ငွေဆောင်ယံ မြို့နယ်ခွဲ ချောင်းသာ ကျေးရွာ ရှိ မြေဧက ၆၁၅.၇ ဧက ကို ပြန်လည်ရရှိရေး အတွက် ချောင်းသာကျေးရွာသား ၂ဝဝကျော် နိုဝင်ဘာ လ၂ ရက် နေ့လည် ၁၂ နာရီခွဲ အချိန်တွင် ဆန္ဒ ထုတ်ဖော် ခဲ့ကြောင်း ၄င်းဆန္ဒ ထုတ်ဖော်ပွဲ ဦးဆောင်သူ ဦးသိပ္ပံစိုးက
11/03/2012 09:30:00 AM
မုန်တိုင်းအလွန် နယူးယောက် မာရသွန် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အရှေ့ဘက်ကမ်းရိုးတမ်း တစ်လျှောက်ဒီတပတ်ထဲမှာ အင်အားပြင်းမုန်တိုင်း ဝင်ရောက်ခဲ့တာဟာ အခုဆိုလို့ရှိရင်သေဆုံးသူ အရေအတွက် ၉၀ကျော်ရှိသွားပါပြီ။ ရေကြီးနေတဲ့နေရာတွေနဲ့ မိးလောင်ပျက်စီးခဲ့တဲ့ ရပ်ကွက်တွေမှာ ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေ အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်သားတွေက ဆောင်ရွက်နေသလို အခုလိုသေဆုံးမှု အရေအတွက်ကလည်း တိုးလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နယူးယောက်မြို့မှာ Read more »
11/03/2012 08:41:00 AM
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း လက်နက်ပုန်းများ ရှာဖွေ တည်ငြိမ်လာပြီဖြစ်တဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ နောက်ထပ်ပြဿနာတွေမဖြစ်အောင်လို့ အကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်တဝှမ်းမှာ နယ်မြေလုံခြုံရေးကို ပိုပြီးတော့ အရှိန်အဟုန်မြင့်တင်းကျပ်ထားပြီး အကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့ လက်နက်ပစ္စည်းတွေ သုံးရက်အတွင်း သက်ဆိုင်ရာကို အမြန်ဆုံး အပ်နှံဖိ်ု့ နိုးဆော်ထားပါတယ်။ ဒီလက်နက်တွေ အပ်နှံမှုမရှိပဲ သိမ်းဆည်းထားတာမျိုး ရှိမရှိကိုလည်း ရှောင်တခင်ဝင်ရောက်စစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်နေပါတယ်။ ဒီအကြောင်းအသေးစိတ်ကို ဆက်သွယ်စုံစမ်းထားတဲ့ မဆုမွန်က တင်ပြပေးထားပါတယ်။
11/03/2012 08:40:00 AM
ရန်ကုန်၊ နိုဝင်ဘာ ၂ ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်း တကျော့ပြန် ဖြစ်ပွား ခဲ့သော ပဋိပက္ခများ ကြောင့် နေရပ် စွန့်ခွာ ထွက်ပြေး နေရသည့် ဒုက္ခသည် များ အတွက် လူုသားချင်း စာနာမှု အကူအညီ များကို တိုက်ရိုက် လှူတန်း သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ပဋိပက္ခ ဖြစ် ပွား ခဲ့မှု များကို လေ့လာရန် ရခိုင်ပြည်နယ် သုို ရောက်ရှိ နေသည့် မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ ဗြိတိန်၊ အမေရိကန် နှင့် Australia နိင်ငံ သံအမတ် ကြီးများက နိုဝင်ဘာ ၁ရက် နေ့တွင် ပြောကြား ခဲ့ကြောင်း ယင်းဒေသခံ များထံမှ သိရှိရသည်။
11/03/2012 08:37:00 AM